Nagu saabsan | HONGGUANG HANDAN CAST FOUNDRY CO., LTD
Shirkadda waxaa la aasaasay 1998
Waxay ku saabsan tahay aag qiyaastii ah 200 mu.
Waxaa jira 450 shaqaale iyo shaqaale.
Soo-saarista sanadlaha ah ee 30 kun tan oo shubis ah
Shirkaddu waxay ka gudubtay nidaamka BSI iyo shahaadada sheyga, iyada oo loo marayo ISO14001: shahaado nidaamka maamulka deegaanka 2004, OHSAS18001 shahaadada nidaamka shaqada caafimaadka iyo amniga; si adag iyadoo la raacayo EN124 iyo heerarka kale ee caalamiga ah ee imtixaanka. Qalabka ugu muhiimsan ee baaritaanka: qalabka falanqaynta walxaha kiimikada, shey-bareeraha, mikroskoobka metroolojiyada, foornada falanqeeye deg deg ah, mashiin tijaabo ah oo caalami ah, tijaabiyaha qallafsanaanta Brinell, shaybaarka ciidda wax lagu nadiifiyo, tijaabiyaha cadaadiska daboolka dhijitaalka ah ee dhijitaalka ah, sheybaarka Haydarooliga, iwm.
Wax soo saarku wuxuu daboolayaa badeecooyin kala duwan, oo ay kujiraan isgaarsiinta, korontada, injineernimada dhuumaha, garoonka diyaaradaha iyo kaabayaasha dowladda hoose ee loo adeegsado daboolka birta birta ee qanjirka 'nodular cover, shabaggeedii, rakibida tuubbada, qalabka baabuurta, qalabka mashiinka, qalabka mashiinada beeraha, makiinadaha birta wax lagu kariyo, qalabka xoolaha. iyo toddobo taxane oo waaweyn, in ka badan 1500 oo nooc.